That's so good, right?: Play Thing
ကောင်းမြတ်နဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းဖြစ်တာ တော်တော့်ကိုကြာနေပါပြီ။ သူ gay တစ်ယောက်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပြီးသားပါ။ ဒါကို ဖုန်းကွယ်ဖို့ သူဘယ်တော့မှ မကြိုးစားခဲ့ဖူးဘူးဗျ။ အမ်း….ဘယ်လိုပြောရမလဲ သူက ကျွန်တော့်ထက် အသက်လေးနည်းနည်းကြီးပေမယ့် တော်တော်ကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ ၃၀နှစ်လောက်တော့ရှိမှာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်အသက် ၂၀နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ သူငယ်ချင်း အချို့နှင့် စားသောက်ပြီး အိမ်ပြန်တဲ့လမ်းလည်းရောက်ရော မြို့ထဲက club တစ်ခုကိုခေါ်သွားမယ် လိုက်ခဲ့လို့ပြောတယ်။ သူ့ကို ကျွန်တော်သည်လည်း gay ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြထားမိတာဗျ။ ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိတဲ့ ငနဲပေါ့ဗျာနော်။ သူကြားနေကြ ကျွန်တော်ပြောပြောနေတဲ့ စကားရှိတယ် “ကျွန်တော့်ကို တစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုလောက် သင်ပေးနော်” ဆိုတာလေး။
မွေးနေ့ညက မသွားဖြစ်ခဲ့ပါဘူး မွေးနေ့ပြီးတဲ့ နောက်တစ်နေ့ရောက်မှ ကောင်းမြတ်က ထုံးစံအတိုင်း “The Den” ကိုခေါ်သွားမယ် စကားစပြန်တော့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ သူက အဖြူရောင် briefs အတွင်းခံဘောင်းဘီဝတ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီကိုအပေါ်ကထပ်၊ အပေါ်ပိုင်းကို တီရှပ်ခပ်မိုက်မိုက်လေးဝတ်ခဲ့ပါတဲ့။ သာမန်သွားနေကျ club တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလားမသိ တောင်းဆိုတာကလည်း Puzzle တစ်ခုကျနေတာပဲ။ “အိုကေ” လိုက်ရတာပေါ့နောက်ဆုံးတော့။
နေရောင်တွေပျောက် လမ်းပေါ်က မီးတွေ လင်းလာချိန်မှာ ကောင်းမြတ် ကျွန်တော့်တိုက်ခန်းကိုလာခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ club ကို ၁၀နာရီဝန်းကျင်လောက် သွားခဲ့ကြတာပေါ့။ Club က ဘားမှာနည်းနည်းပါးပါးသောက်ပြီး စကားစမြည်ပြောကြပါတယ် ခဏပေါ့။ တစ်ယောက်ပြောတဲ့စကား တစ်ယောက်ကြားဖို့ နည်းနည်းခက်တဲ့နေရာပါပဲဗျာ။ သီချင်းတွေနဲ့ အတူကခုန်နေကြတာ ဆူညံလို့။ နေရာအနှံ့ကခုန်နေကြတဲ့ အမျိုးသားတော်တော်များများဟာ အပေါ်ပိုင်းအင်္ကျီမရှိကြဘူး။ အချို့ကတော့ အားရပါးရပွေ့ဖက်ခြင်း၊ နမ်းရှုံ့ခြင်းတွေ လုပ်နေကြတယ်။ ဒါတွေကို မြင်လာရတော့ ကျွန်တာ့်ကိုယ်ထဲမှာ မာန်ဟုန်ပြင်းတဲ့ သွေးတွေဆူပွက်လာရော။ အုပ်စုလိုက် အများအပြား ယောက်ျားတွေ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပွေ့ဖက်နေကြတာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်မြင်ဖူးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခွက် ထပ်သောက်တယ်။ ပြီးတော့ တစ်ခွက်ပြီးတော့ တစ်ခွက်။ ကောင်းမြတ်က မကချင်ဘူးလား မေးသေးတာ။ ကျွန်တော်လည်း အခုမှသောက်ထားတာဆိုတော့ ခဏလေးငြိမ်နေပြီးမှ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ Wow! ကပွဲကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ မြူးတူး ကခုန်လှုပ်ရှားရတာ အရမ်းကို erotic ဖြစ်သပေါ့။ ကျွန်တော် ကောင်းမြတ်နဲ့ ကနေတုန်း ညာဘက်က ငနဲတစ်ပွေက ကျွန်တော့်ကိုသူ့ဆီ ဆွဲယူပြီး sexy dance ကတော့တာပဲ။ အိုး…..shit!! အဲ့ငနဲရဲ့ မာတောင့်နေတဲ့ -ီးက ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေကို လာလာထိနေတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ခါးအစုံကို သူ့ဆီဆွဲပြီး ပိုပို ပူးကပ်စေတာပါ။ ကျွန်တော့်ငပဲသည်လည်း ပွတ်တိုက်မှုများရဲ့နောက် တဆတ်ဆတ် မာတောင့်လာကာ သူ့ပေါင်ခြံများဆီ ဖိကပ်ပြီပေါ့။ တီးလုံးသံများကြား ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လျားနေတုန်း ကောင်းမြတ်ကလည်း ခပ်မိုက်မိုက် ငနဲတစ်ပွေနဲ့ ခပ်မိုက်မိုက်ကဲနေတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် အမည်မသိငနဲနဲ့ မျောနေတုန်း နောက်ငနဲတစ်ပွေက ကျွန်တော့်နောက်ကနေ တိုးကပ်ပြီးကလာတာများ သူ့ငပဲခပ်မာမာက တင်သားဆိုင်တွေကို တိုးထိထောက်လှမ်း နေရော။ ရှေ့ကလူနှင့် နောက်ကလူ သူတို့ပခုံးကိုယ်စီပေါ်လက်တင်ပြီး လှုပ်ရှားနေကြတာ ကျွန်တော့်အဖို့ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်တစ်လုံး ထဲက အသားလွှာလိုဖြစ်လာပါတယ်။
ကောင်းမြတ်လာမခေါ်ခင်အထိ ကျွန်တော့်မှာသာယာပြီးမျောနေတာ တော်တော်ကြာတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘားကိုပြန်လာပြီး နောက်တစ်ခွက် မော့ဖြစ်ပါရဲ့။ သောက်မိတာက ဘာလဲမပြောတတ်ဘူး ကျွန်တော်မော့ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ထဲနွေးသွားကာ တော်တော့ကို သက်သောင့်သက်သာဖြစ်သွားသလို ခံစားလိုက်ရပါတယ်။
ကောင်းမြတ်က “The Den” ရဲ့နောက်ဘက်ပိုင်း “Play” ဧရိယာလို့ခေါ်လို့ရမယ့်ဆီ ဆင်းသွားကြဖို့ အကြံပြုတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လှေကားများကတစ်ဆင့် လိုက်ဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ သက်သောင့်သက်သာနဲ့ ဘယ်သူ့မှ ဂရုစိုက်နေစရာမလိုတဲ့ ခံစားမှုမျိုးရရှိတာ အတော်ဟန်ကျရဲ့။
ကျွန်တော် ဘာလုပ်နေတယ် ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိပါသေးတယ်ဗျာ သိပ်မလွတ်သေးပါဘူး။ လှေကားကနေဆင်းသွားတော့ အခန်းကြီးက တော်တော်ကျယ်တာပဲ….အ၀တ်အစားမဲ့…..အ၀တ်အစားကပိုကရို အမျိုးစုံသောငနဲတွေနဲ့ ပြည့်နေရော။ အချို့က တစ်ကိုယ်လုံးဘာအ၀တ်မှကို မရှိဘူး……Whoo…။ ဒါတွေက ကျွန်တော့်အတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်တော့မဖြစ်ဘူး…..ဘာတွေကမှ စိတ်မရှုပ်စေပါဘူးလေ….အေးဆေး။ ညအိပ်မီးလိုမျိုး ခပ်မှိန်မှိန်မီးကို ထွန်းထားတာကြောင့် စိတ်ထဲတစ်မျိုးတော့ဖြစ်မိတယ်။ အင်း….. ပြင်ဆင်ထားတာတွေက အလန်းဇယားပါပဲ။
ကျွန်တော်တော့ အခန်းဝကနေအတွင်းပိုင်းဆီလျှောက်လှမ်းတော့ လူအချို့တိုးကပ်လာကြတယ်။ ကျွန်တော့်ငပဲမှာ ပြန်ပြီးခေါင်းထောင် လာရတယ်….. သူတို့တွေက ကျွန်တော့်တင်ကိုပွတ်သပ်ဖျစ်ညှစ်သလို ရှေ့ကအထုပ်အထည်ကိုလဲ မကြာခဏ ကလိတာကိုး။ မာခြင်းအဆင့်က ၉လောက်ရှိနေပြီ ကျွန်တော့ငပဲကလေ။ ခါးပါတ်ပါတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့ ဇစ်ကြားကနေပေါက်ကွဲထွက်ချင်နေပြီ။ လက်တွေကို ချည်နှောင်တဲ့ကြိုးတွေ၊ သားရေဆိုင်းကြိုးတွေ၊ ကြာပွတ်လို တုတ်တံတွေချိတ်ထားသောနေရာကိုရောက်တော့ ကောင်းမြတ်က ကျွန်တော့်လက်တွေ ခြေထောက်တွေကို အပျော်သဘော ချည်နှောင်ကြည့်ပါလားတဲ့ အကြံပေးပြန်တယ်။ စိုးရိမ်စိတ်လေး မသိမသာဝင်ပေမယ့် သဘောတူလိုက်ပါရဲ့။ ပိုက်ကွန်သဘော ချည်နှောင်ထားတဲ့ကြိုးသေးသေးလေးတွေက ရှိနှင့်နေပြီး သားဗျ။ ကျွန်တော့် ညာဘက်လက်မောင်းကိုမပြီး ချည်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ ဘက်ဘက်လက်မောင်းပေါ့နော်။ “အား…အ” ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းအစုံကို သူတပ်မက်စွာနမ်းရှုံ့ကာ……တီရှပ်ပေါ်ကနေပဲ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အသာလိမ်ဆွဲတယ်။ မဆိုးဘူး…..ခံစားရတဲ့ဖီလင်က မိုက်တယ်ဗျ။ ကျန်နေသေးတဲ့ ကျွန်တော့်ခြေထောက်တွေဆီရွေ့တယ် သူ့လှုပ်ရှားမှုက။ ခြေချင်းဝတ်တွေကို ချည်နှောင်…..နောက်တော့ ကျွန်တော့်ခါး။
ရုတ်တရက် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတော်တော်ကို မလုံခြုံတဲ့ ခံစားမှုမျိုး ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ၂၅ယောက်လောက်ရှိတဲ့ ငနဲတွေက ပိုက်ကွန်လိုကြိုးမှာ ကျွန်တော့်ကို ကောင်းမြတ်သေချာ ချည်နှောင်နေတာကို စိုက်ကြည့်နေတာ သိလိုက်ရလို့ပါပဲ။ ကောင်းမြတ်…..သူ့စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်ထဲကအတိုင်း အလုပ်ကြိုးစားပြီးနောက် နောက်ပြန်ဆုတ်ကာ ရပ်လိုက်ရင်း “အဆင်ပြေသွားပြီ၊ မင်းဘယ်လိုနေလဲ ငါ့ကောင်” လို့ တမျိုးတမည်သောအသံနှင့်ပြောတယ်။ သူလည်း နောက်ပြန်ဆုတ်ရပ်လိုက်ချိန်လေးမှာပဲ ငနဲတစ်ပွေ ကျွန်တော့်ဆီ လှမ်းလာပြီး ကျွန်တော့်ငပဲကိုဆွဲကိုင်တယ် ဂျင်းဘောင်းဘီအပေါ်ကနေပေါ့။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း နှုတ်ခမ်းအစုံကို စုပ်နမ်းကာ သူ့လျှာအရှည်ကြီးကို ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲရောက်သွားမတတ်ထိုးထည့်တယ်။ ကျွန်တော် ရှောင်ပြေးဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပေမဲ့ အဲဒီ့လူရဲ့ အားနေတဲ့ နောက်လက်တစ်ဖက်က ကျွန်တော့်ဆံပင်တွေကိုဆွဲထားပြီး လုပ်လက်စအလုပ်ကိုဆက်လုပ်တာ။ ဟိုး…..ကျွန်တော့်တင်သား ဆိုင်တွေကိုလည်း နောက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်က ဆွဲကိုင်လိုက်တာကို ခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော် ကျွန်တော် ကြောက် လန့် သွား….ဒါပေမဲ့ လိင်စိတ်နိုးကြွစေတာရော……သောက်ထားတဲ့အရာတွေ သွေးထဲက ဆူပွက်နေမှုကြောင့်ရော ဒီထက်ပိုပို လိုချင် လာသလိုပဲဗျာ……I got it.
ဘဲတစ်ပွေက ဟိုသည်ပွတ်သပ် ဟိုစမ်းသည်စမ်းလုပ်ပြီး တစ်နေရာရွေ့သွားရင် နောက်တစ်ယောက်က အစားထိုးဝင်လာသည်ပေါ့။ ဟီး….. ပျော်စရာတော့ကောင်းသားလို့ ထင်မိပေမဲ့….ဒီအပေါ်ဟာ အစပျိုးမှုလေးသက်သက်ရှိသေးဟန်တူရဲ့။
လာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်က ကျွန်တော့်အရှေ့တည့်တည့်မှာလာရပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဟိုစမ်းသည်စမ်း မလုပ် (သို့မဟုတ်) နမ်းပြုတာလည်းမလုပ်ဘဲ တော်တော်ကြာတဲ့အထိကြည့်နေတာ သူ့နှုတ်ခမ်းသားတွေကို လျှာနဲ့ပြန်သပ်ရင်းပေါ့။နောက်တော့ သူ ကျွန်တော့်လည်ပင်းအစပ်က တီရှပ် အနားစကို ပွတ်သပ်ပြီးဟကြည့်တယ်။ သူ….သူ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်ညှိုးလက်မ သုံးပြီး ညှပ်ဆွဲတယ်လေ။ ကျွန်တော့်မှာ ရုတ်တရက်ရရှိလိုက်တဲ့ ခံစားမှုကြောင့် တော်တော့်ကို နာသွားတာ။ ဒါပေမဲ့ မကြာခင်မှာပဲ သာယာသလိုလိုဖြစ်သား။ နောက်တော့ ကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းတွေကို လျှာနဲ့ ရစ်ဝိုက်မှုလုပ်ရင်း စုပ်ပြုပါတော့တယ်။ နောက်တော့ သူအားမရတော့ဘူးထင်တယ် တီရှပ်ကို ဖျက်ဆီးဖို့သူကြံရွယ်ပါရဲ့။ သူ….အင်္ကျီင်္ီကို မရမကဆွဲချွတ်ကာ ကြမ်းပြင်ပေါ်ပစ်ချ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ ရင်အုပ်ပေါ်က အနက်ရောင် နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို အငမ်းမရစုပ်၊ လျှာတွေနှင့် ရစ်ဝိုက်…..တပြွတ်ပြွတ်မည်အောင် ကိုဆော့ပါတော့တယ်။
အသားခပ်ညိုညို နောက်ဘဲတစ်ပွေက ကစားပွဲထဲပါဝင်လာကာ ကျွန်တော့်ခါးပါတ်ကို ဂျင်းဘောင်းဘီကနေဆွဲဖြုတ်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ထိတ်ကနဲလို လန့်သွားမိပေမယ့်ငနဲက ကျွန်တော့်နားအ၀က အသီးလေးကို လျှာနှင့် ရစ်ဝိုက်ပြီးမျှဉ်းစုပ်လိုက်တဲ့ အခါမှာတော့ ကျလိ ကျလိတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ ခါးမှာဝတ်ထားတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီလည်း ဘယ်လိုကျွတ်သွားမှန်းမသိ သုံးလေးယောက် လောက်က ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကို ချိုးဖဲ့တော့မတတ် ပွတ်သပ်နမ်းရှုံ့နေကြတာဆိုတော့ ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲ? ဆိုတဲ့စိတ်တွေအဝေး ကိုပြေးကုန်ပါတယ်။
Oh!! ကျွန်တော့်ခြေထောက်က ဖိနပ်၊ ခြေအိတ်၊ သိုင်းထားတဲ့ကြိုးတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်ပြီ မသိတော့ပါဘူး။ အဖြူရောင်အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ….အစွမ်းကုန်မာတောင့်နေတဲ့ငပဲနှင့် ငနဲတွေကြား ခပ်ထင်းထင်းကိုဖြစ်နေရော။ ၀ိုင်းနေတဲ့ သူတို့ မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ တပ်မက်တဲ့ အငမ်းမရ မီးလျှံတွေတောက်လောင်နေပါတယ်။
နောက်ဖက်ကနေ ကျွန်တော့် briefs ဘောင်းဘီကို အောက်ဆွဲချ ချွတ်ပစ်တာကို ခံစားရတာနှင့်အတူ တင်သားဆိုင်တွေကိုပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ်မှုအား စတင်ကြုံတွေ့ရပါတယ်။ ရှေ့ပိုင်းကလည်း ဘာထူးလဲ….. အတူတူပဲ။ ကျွန်တော့်အတွင်းခံဖြူဖြူကလေးခမျာ ခြေချင်းဝတ်မှာချိတ်ပြီး တရွတ်တိုက်ဖြစ်နေပြီ။ ရှေ့ နောက် ဘယ် ညာက လူဘယ်နှစ်ယောက်လဲ မသိတော့ဘူး ပွေ့ဖက်၊ ပွတ်သပ် ဖျစ်ညှစ်နေတော့တာလေ။ ဒီကမ္ဘာမှာ ဂရုစိုက်စရာ တစ်ယောက်မှမရှိဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ကျွန်တော်ဖြစ်သွားရော။ ကျွန်တော့် ငပဲ….ဖေ့သားကြီး က ဂုဏ်ယူစရာကြီးထွားမာတောင့်ဦးမော့ကာ ဆီးခုံကိုပြေးကပ်နေသယောင်ပါ။ မျက်စိတစ်မှိတ်အတွင်း ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ဘာမှမရှိတော့ ဟာလာဟင်းလင်း။
နာရီလက်တံတွေ တဖြည်းဖြည်းရွေ့လျားသွားပြန်တော့ ငနဲတစ်ချို့က ကျွန်တော့်ရွှေဥ သို့ ငပဲတွေကို စုပ်မှုတ်လျက်ပြုနေတာ ကောင်းလွန်းတော့လည်း တဖြေးဖြေးနှင့် အစွန်းတစ်ဖက်စီ ကျွန်တော့်ကို တွန်းပို့နေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ဘယ်လူ ဘယ်တစ်ယောက်က တွန်းလိုက်သည်မသိ ကြမ်းပြင်လိုညီနေတဲ့ ခပ်စောင်းစောင်းခုံတစ်လုံးပေါ် လေးဘက်ထောက်သလိုဖြစ်သွားရော။ ရှေ့တည့်တည့်က အရပ်မြင့်မြင့်ငနဲက ထွားလှတဲ့သူ့ပစ္စည်းကြီးကို ကျွန်တော့်ပါးစပ်မှာဆွဲတော့ပြီး အတွင်းထဲရောက်အောင်ကြိုးစားပါတော့တယ်။ ပါးစပ်လေး အသာဟပေးမိတော့ သာမန်ထက်ရှည်လျားတဲ့ ငပဲကြီးကိုအသွင်းအထုတ်လုပ်တာများ ကျွန်တော့်လည်မျိုထဲထိရောက်လာ သလိုပါပဲ။ တစ်ချက် သူအဆုံးထိသွင်းဖို့ကြိုးစားလိုက်တာကြောင့် လန့်ပြီး နံရံက condom တွေ ချောဆီဘူးတွေထည့်ထားတဲ့ box ကို ဆွဲချလိုက်သလိုဖြစ်သွားကာ condom တော်တော်များများကြမ်းပြင်ပေါ် ကျကုန်ရော။
“အာ…အ…အား” ကျွန်တော့်ရဲ့ အပျိုစင်ခရေ၀ထဲကို နောက်ကျောဖက်က ဘဲတစ်ပွေက တစ်ခုခုဖိသွင်းနေတာကို ခံစားလိုက်ရပြန်တယ်။ ဒါ…လက်ချောင်း တစ်ချောင်း….၊ နောက်ထပ်တစ်ချောင်း…၊ ပြီးတော့ တစ်ချောင်း အထုတ်အသွင်းလေး ခပ်ဖြေးဖြေးလုပ်လို့တော်သေးတာ။ ချောကျိကျိ ခပ်ပျစ်ပျစ် Lube တွေ ကျွန်တော့်ခရေ၀တလျှောက် အတွင်းအပြင်နှံ့စပ်သွားပြီးနောက်မှာ သိပ်မကြီးပေမဲ့ ရှည်လျားသော ငပဲတစ်ချောင်းဟာ တရစ်ခြင်း တိုးဝင်ပါတော့တယ်။ “Oh My!!” ရင်ထဲ ဟာကနဲ ခံစားလိုက်ရသလို…..ပါးစပ်ထဲကိုလည်း တစ်ပြိုင်တည်းလိုလို ငပဲကြီးတိုးဝင်လာတာ အော့အံမိတော့မတတ် ခံစားရတဲ့ ဖီလင်က အသစ်ပဲဗျာ။
“အို….အို….အို” ပါးစပ်ပေါက်ကော -င်ပေါက်ကော အထုတ်အသွင်း ခပ်မှန်မှန်ထည့်သွင်းခံနေရပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က အဆုံးစွန်ကိစ္စပြီးသွားရင် နောက်ထပ်တစ်ယောက်က အစားဝင် ဇာတ်လမ်းဆက်ကတာအပြင်….ကျွန်တော့်ရွှေဥနှင့် ညီဘွားခမျာမှာ လည်း စုပ်မှုတ်ခံရလွန်းလို့ ထုံနေပါပြီ။ ကျွန်တော့်ငပဲလေးမှာ ပြုစုရေးကောင်းမွန်လို့တော်ပါသေးရဲ့။ ဒါပေမဲ့ အဆုံးစွန်ဖီလင်သို့ မြင့်တက်ဖို့ အခွင့်အရေးမပေးသေးပါဘူး။ ခါးအစုံကိုဖမ်းကိုင် တင်သားဆိုင်တွေထဲ မြုပ်မြုပ်သွားအောင် နောက်က ညှောင့်ခံရတဲ့…. လည်မျိုထဲ လျောကနဲ လျောကနဲဝင်လာတဲ့ ငပဲကြီးကြောင့်ရော ခံစားရတဲ့ဖီလင်ဆီကို အာရုံရောက်ရောက်သွားရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အာရုံကျသူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များသလဲမသိ မှတ်တောင် မမှတ်မိရတော့ပါ။
နောက်ဆုံးလို့ဆိုရမယ့် လူတစ်ယောက်က သူ့အဆုံးသတ်ကို ကျွန်တော့်ပေါင်တံတွေမှာ ပန်းထုတ်လိုက်တာကြောင့် ခပ်နွေးနွေး အရည်တစ်မျိုး ခြေသလုံးဆီ စီးဆင်းသွားကြပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကောင်းမြတ် ကျွန်တော့်ရှေ့မှောက်ပေါ်လာပြီး စိုစွတ်နေတဲ့ ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို တရှိုက်မက်မက် သူနမ်းပါတော့တယ်။ ကျွန်တော့်အလှည့်ရောက်သင့်ပြီတဲ့ သူကပြောသေးရဲ့။ ကျွန်တော့် မတ်မတ်ရပ်စေပြီး သူကတော့ မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ချကာ ခပ်နွေးနွေးအရည်တွေနှင့် ပြည့်နေမယ့် ကျွန်တော့်ရွှေဥတွေနှင့် ငပဲကို လျာအပြားလိုက်ထုတ်ကာ လျက်ပြု….အာ…သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကိုသုံးကာ ကျွန်တော့်ငပဲကို သူ့လည်မျိုထဲတိုင် မျိုချပစ်ပါရော။
ကောင်းမြတ် ဘယ်လိုများစွမ်းတယ် မပြောတတ်တော့အောင်ပါပဲလေ။ ဟူး….ကနဲ သက်ပြင်းချမိရတဲ့အထိ သူ့အာခံတွင်းထဲကို ကျွန်တော့်ရွှေရည်တွေအပြည့်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရာအားလုံးငြိမ်သွားတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်မတ်တပ်ကောင်းကောင်းမရပ် နိုင်တော့ဘဲ သာခွေယိုင်ဖြစ်လုနီးပါပြီ။ မောဟိုက်ကာ ချွေးတွေလည်းရွှဲပြီပေါ့။
ကောင်းမြတ်နဲ့ သူ့ဘော်ဒါတစ်ယောက်ကထိန်းပေးပြီး ဘောင်းဘီတွေပြန်ဝတ် ဖိနပ်ကောက်စွပ်ပြီး တီရှပ်ကိုလက်ကနေပဲကိုင်ထားတော့ တယ်။ ရင်အုပ်တွေနှင့် ပခုံးတွေမှာ သုက်ရည်အချို့ပေစွန်းနေတာကိုလည်း မဖယ်ရှားချင် ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ဂရုမစိုက်နိုင်ပါ။ ကောင်းမြတ်တွဲခေါ်ပြီး club အပြင်ဘက် ကားပါကင်က ကောင်းမြတ်ရဲ့ကားအဖြူလေးပေါ်ရောက်မှ တစ်ရှူးတွေနှင့် သုတ်သင်လိုက်ရပါတော့တယ်။
တရိပ်ရိပ်နဲ့ ကားကလေးကိုမောင်းကာ သူ့ရဲ့ကွန်းခိုရာကို ကျွန်တော့်အားခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ခပ်မှိန်မှိန် မီးရောင်လဲ့လဲ့နှင့်မွှေးပျံ့ နေတဲ့ သူ့ရေချိုးခန်းထဲမှာလည်း ကောင်းမြတ်က ရေချိုးသန့်စင်စေ၊ တဘက်ကြီးနှင့်လည်း ခြောက်သွေ့စေပါရဲ့။ ပြီးတော့ မွှေးပွရုပ်အချို့ရှိနေတဲ့ သူ့အိပ်ယာကြီးအပေါ်ခေါ်ဆောင်ပါတယ်။
“၀ါး” ကျွန်တော် ကမ္ဘာမြေပေါ်က ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ဂရုထားစရာမရှိ သန်မာထွားကြိုင်းလှတဲ့ ကောင်းမြတ်ရဲ့ လက်မောင်းကြီးတွေထဲ အလိုက်သင့် အိပ်စက်ဖြစ်တဲ့ညဆိုပါတော့လေ။
ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တဲ့အရာနှင့် ပြည့်နေတဲ့ အံ့သြစရာကောင်းသော အိပ်မက်မက်နေခြင်း…..good night!!!
Alex Aung (7 March 2013)
angle white said...
ကောင်းလိုက်တာ အဲ့လို ကလပ်မျိုးသွားချင်တယ်
နောက်ဆုံး သုံးပိုဒ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ :)